30 Nke a bụ okwu Jehova nke ruru Jeremaya ntị, sị:
2 “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, ‘Dee okwu niile m ga-agwa gị n’akwụkwọ.+
3 N’ihi na, “lee! oge na-abịa,” ka Jehova kwuru, “mgbe m ga-achịkọta ndị m a dọọrọ n’agha, bụ́ Izrel na Juda,”+ ka Jehova kwuru, “m ga-akpọlata ha n’ala m nyere ndị nna nna ha, ha ga-ebirighachi na ya.”’”+
4 Ihe ndị a ka Jehova gwara Izrel na Juda.
5 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Anyị anụwo mkpọtụ nke ịma jijiji na nke ụjọ,+ udo adịghịkwa.
6 Jụọnụ ajụjụ, chọpụtakwanụ ma nwoke ọ̀ na-amụ nwa. Gịnị mere m ji hụ ka nwoke ọ bụla gbanyere aka n’úkwù ka nwaanyị na-amụ nwa,+ ihu niile agbarụọkwa agbarụ?+
7 Ewoo! N’ihi na ụbọchị ahụ bụ oké ụbọchị,+ ọ dịghị ụbọchị ọzọ dị ka ya,+ ọ bụkwa oge ahụhụ nye Jekọb.+ Ma a ga-azọpụta ya n’ahụhụ ahụ.”
8 “Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ,” ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, “na m ga-agbaji yok ahụ ha nya n’olu, m ga-adọbikwa agbụ ha ụzọ abụọ,+ ndị ala ọzọ agakwaghị erigbu ha dị ka ohu.
9 Ha ga-efe Jehova bụ́ Chineke ha ofufe, jeekwara Devid bụ́ eze ha,+ onye m ga-enye ha, ozi.”+
10 “Ma gị onwe gị, ohu m Jekọb, atụla egwu,” ka Jehova kwuru, “atụkwala ụjọ, Izrel.+ N’ihi na, lee! m ga-azọpụta gị n’ebe dị anya ị nọ, zọpụtakwa ụmụ gị n’ala a dọọrọ ha n’agha laa.+ Jekọb ga-alọta, ọ gaghịkwa enwe nsogbu, ahụ́ ga-erukwa ya ala, ọ dịghịkwa onye ga-eme ka ọ maa jijiji.”+
11 “N’ihi na m nọnyeere gị,” ka Jehova kwuru, “ịzọpụta gị;+ ma m ga-ekpochapụ mba niile m chụgara gị.+ Otú ọ dị, agaghị m ekpochapụ gị.+ M ga-agbazi gị ruo n’ókè kwesịrị ekwesị, n’ihi na agaghị m ahapụ inye gị ntaramahụhụ.”+
12 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ọkpụkpụ gị nke gbajiri agbaji enweghị ngwọta.+ Ọnyá gị agaghị ala ala.+
13 Ọ dịghị onye na-ekpechite ọnụ gị iji gwọọ ọnyá gị.+ Ọ dịghị ụzọ a ga-esi gwọọ gị, a pụghịkwa ịgwọta gị.+
14 Ndị niile hụrụ gị n’anya nke ukwuu echefuwo gị.+ Ọ bụghị gị ka ha na-achọ. N’ihi na apịawo m gị ụtarị onye iro,+ bụ́ ụtarị onye obi tara mmiri,+ n’ihi ọtụtụ njehie gị;+ mmehie gị adịwo ukwuu.+
15 Gịnị mere i ji eti mkpu n’ihi ọkpụkpụ gị nke gbajiri agbaji?+ Ihe mgbu gị enweghị ngwọta n’ihi ọtụtụ njehie gị; mmehie gị adịwo ukwuu.+ Emewo m gị ihe ndị a.
16 Ya mere, a ga-eripịa ndị niile na-eripịa gị;+ a ga-adọrọkwa ndị iro gị niile n’agha.+ A ga-akwakọrọ ihe ndị na-akwakọrọ ihe gị, m ga-enyefe ndị na-ebukọrọ ihe gị n’aka ndị ga-ebukọrọ ihe ha.”+
17 “N’ihi na m ga-eme ka ị gbakee, m ga-agwọkwa ọnyá gị,”+ ka Jehova kwuru. “N’ihi na ha kpọrọ gị nwaanyị a chụpụrụ achụpụ,+ sị: ‘Lee Zayọn, nke ọ na-enweghị onye na-achọ ya.’”+
18 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Lee, m ga-achịkọta ndị e si n’ụlọikwuu Jekọb dọrọ n’agha,+ m ga-enwere ụlọikwuu ya dị nsọ ọmịiko. A ga-ewughachi obodo ya ná mkputamkpu ala ya;+ ụlọ elu ya ga-adịkwa n’ebe o kwesịrị ịdị.+
19 Ha ga na-enye ekele, a ga na-anụ olu ndị na-achị ọchị n’etiti ha.+ M ga-eme ka ha mụbaa, ha agaghịkwa adị ole na ole;+ m ga-eme ka ha dị ọtụtụ, ha agaghịkwa adị ntakịrị.+
20 Ụmụ ya ga-adị ka ha dị n’oge gboo, a ga-eme ka nzukọ ya guzosie ike n’ihu m.+ M ga-elebara ndị niile na-emegbu ya anya.+
21 Onye ukwu ya ga-esi n’ahụ́ ya pụta,+ ọ bụkwa n’ime ya ka onye na-achị ya ga-esi pụta;+ m ga-eme ka ọ bịa nso, ya onwe ya ga-abịakwute m.”+
“N’ihi na, ònye bụ onye a nke ji obi ya gbaa ibé iji bịakwute m?”+ ka Jehova kwuru.
22 “Unu ga-abụ ndị m,+ mụ onwe m ga-abụkwa Chineke unu.”+
23 Lee! Oké ifufe Jehova, ya bụ, ọnụma ya, bụ́ oké ifufe nke na-efesi ike, abịawo.+ Ọ ga-efekwasị ndị ajọ omume n’isi.+
24 Iwe dị ọkụ nke Jehova agaghị adajụ ruo mgbe o mere ihe dị ya n’obi,+ ruokwa mgbe o mezuru ya. Unu ga-echebara ya echiche n’oge ikpeazụ.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D24%26Chapter%3D30%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl